ဝက်အူထုပ်ပိုးစက်, ဟာ့ဒ်ဝဲထုပ်ပိုးစက်, ထုပ်ပိုးစက်ထုတ်လုပ်သူများကိုရေတွက်ခြင်း
ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီ Non-စံပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဟာ့ဒ်ဝဲ accessories.Design နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ထုပ်ပိုးနည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ များစွာကိုဖောက်သည်များအတွက်အလေးချိန်နှင့်ရေတွက်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အတူအများအပြားလက်တွေ့ကျတဲ့အခက်အခဲများဖြေရှင်းအောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးယခုမှတက်, Feiyu အောင်မြင်စွာထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပရိဘောဂ, စွဲစေအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေအတွက်ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီ, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဆက်စပ်ပြပွဲကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားကောင်းတစ်ဦးအပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းပေး။
2008 ၌တည်ရှန်ဟိုင်း Feiyu ထုပ်ပိုးစက်ယန္တရား Co. , Ltd, စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူရေတွက်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးမှမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးအပေါ်လုံ့လဝီရိယကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနှစ်တဆင့် Feiyu- Pack ကိုအာရှရှိတဲ့ professional ထုပ်ပိုးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်လာသည်။
Pack စက်ရေတွက်အသေးစား Bag ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ
စက် 1-မဲရေတွက်ထုပ်ပိုးစက်နိယာမ 1.1-စက်မှုရေတွက်ထုပ်ပိုးရေတွက်အသေးစားအိတ်ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုဤနည်းအသေးအရေအတွက်ထုပ်ပိုးများအတွက်သင့်လျော်သည် (1-12pcs / အိတ်), အ fittings အကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးကို အသုံးပြု. နှင့်မှ, ဒီအကွာအဝေးဖို့ပျက်စေ adjust ယင်းရေတွက်စေ။ ဤနည်းသည်ကြီးမားသောရေတွက်ဖို့သင့်လျော်မဟုတျပါဘူး ...
Pack စက်ရေတွက်အလိုအလျောက်ဟာ့ဒ်ဝဲ Nut Bolt က
အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်းထုပ်ပိုးစက်ရေတွက်ဒီဟာ့ဒ်ဝဲခွံမာသီးမူလီတရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တိုင်းတာ၏အလိုအလျှောက်ပြီးစီး, အိတ်ချမှတ်ခြင်း, ဖြည့်စွက်, ပိတျထားသော, ဖြတ်တောက်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း codes တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်း, အဆင့်မြင့် PLC နှင့် photoelectric ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားချမှတ်။ ဒီအစက်ပေါင်းထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရေတွက်အဘို့ဖြစ်၏နှင့် ...
ဒီအစက်အကွာရေတွက်ခြင်းနှင့်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူး re-စစ်ဆေးခြင်း, ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးရေတွက်ချမှတ်, ဝက်အူသက်ဆိုင်, ခွံမာသီး, အဝတ်လျှော်နှင့်အခြားသောပုံမှန်ပုံသဏ္ဌာန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးနဲ့ပေါင်းစပ်တွက်ဆပိတျထားသောချောမွေ့နှင့်ကြော့အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်မြင့်မားထိရောက်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု counting.Solid ပိုမိုနှစ်သက် elements.Automatic သာသနာကို, ရေတွက်, ထုပ်ပိုးများနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုလည်းပူဇော်သက္ကာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ တပ်ဆင်ထား ...
Sent ကို Message
ရှန်ဟိုင်း Feiyu Machinery Co. , Ltd မှထုတ်ပိုး
ဖက်စ်: + 86 21 5974 7298
နေရပ်လိပ်စာ: No.33, ယာဉ်ကြော 3238, waiqingsong လမ်း, Baihe မြို့, Qingpu ခရိုင်, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
ထောင့်ကွက် Pack စက်
Fastener Pack စက်
hardware Pack စက်
ဝက်အူ Pack စက်
2 ပန်းကန်ဝက်အူပရင်တာနှင့်အတူ Pack စက်ရေတွက်
hardware Pack စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်ပစ္စည်း
ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်ပိုး hardware အစိတ်အပိုင်းများ - ထုပ်ပိုးစက်ရေတွက်အပေါ်တွင်မူတည်
ပုံးနှင့်အတူခွံမာသီးနှင့် Bolt က Pack စက်
ရှန်ဟိုင်း Feiyu ထုပ်ပိုး Machinery Co. , Ltd မှ© Copyright